को शहर नेदरल्यान्ड्स आफ्नो साइकिल प्रेम. युट्रेच्ट यसको साइकल मा धेरै निवेश पूर्वाधार. लामो साइकल सडकमा र विशाल पार्किंग सुविधाहरु सजिलो त्यहाँ बाइक प्रयोग बनाउन.
म्यूनिख एक विशाल साइकल नेटवर्क क्षेत्र निर्माण र साइकलको पूर्वाधार सुधार गर्न स्पष्ट योजना छ. परम लक्ष्य पुग्न छ 30% बाइक लागि सर्वसाधारण शेयर. तपाईं प्रयास गर्न बाइक मा म्यूनिख वरिपरि रही चाहनुहुन्छ भने, तपाईं बर्लिन देखि रेल द्वारा त्यहाँ यात्रा सक्छ, भियना, र ज्यूरिख, अन्य शहर बीच.
तपाईं आफ्नो मात्र साइकल र रेल प्रयोग युरोप गरेको सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य केही गर्न भ्रमण भुक्तानी गर्न तयार छन्? एक जीवनकालमा को साहसिक लागि तयार, र तपाईंको रेल टिकट बुक प्रारम्भिक!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-bike-friendly-cities/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Bike-Friendly #बाइक Bike bikefriendly europetravel रेल यात्रा